हेलिकोप्टर चढेर बादलको उम्मेदवारी दर्ता - Upabhokta Nepal
हेलिकोप्टर चढेर बादलको उम्मेदवारी दर्ता
Reporter	काठमाडौं	वैशाख २४, २०७८
गृहमन्त्री थापाका प्रतिद्वन्द्वी डा. खिमलाल देवकोटाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री थापा सत्तारुढ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । एमाले निकटकै बुद्धिजीवीका रुपमा चिनिने डा. देवकोटाले माओवादी, काँग्रेस र माधवनेपाल समूहका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
बादलले सूर्य चिन्हबाट र देवकोटाले हँसिया-हथौडा चिन्हबाट चुनाव लड्ने छन् । जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभाको उप निर्वाचनमा वागमती प्रदेशसभाका ११० र स्थानीय तहका २३८ जना प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदान गर्नेछन् ।
२०७८ वैशाख २४ गते शुक्रवार १३:१९ बजे प्रकाशित
अक्सिजन उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर
अस्पतालमा बेड र अक्सिजन छैन, होम आइसोलेसनमै निधन